Lokuzalwa Okwesibili: Ukulungisa
Ikhaya Nomkhaya, Sokukhulelwa
Zonke odokotela zinombono ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kwezimfundiso lokuzalwa lokuqala kanti eyesibili. lokuzalwa Okwesibili awukwazi ezithinta impilo yakho, futhi angase abe izinkinga ezithile zokumpontshelwa imiphumela hhayi mnandi kakhulu. It kuxhomeke kumuntu ngamunye. Siyini isizathu? Kuya ngokuthi ngokuyinhloko ezicini eziningi: impilo, ubudala kwabakhulelwe, ekudleni. Lapho okokuqala umuntu wesifazane ukhulelwa kanjani, yena ezahlukweni isikhathi esiningi empilweni yabo kanye nenhlalakahle, njengoba kwakunjalo ingane yakhe yokuqala eside elindelwe. lokuzalwa Okwesibili, njengoba umthetho, akusho umvumele ukuba bachithe isikhathi esiningi ngokwakho, ngoba ngesikhathi owesifazane abadliwa imisebenzi yasekhaya nokuvusa perebka kuqala. Yiqiniso, udinga kabili isikhathi, okuyinto enendawo, maye, akukho, ngokuba ingane yokuqala futhi zidinga ukunakekelwa, udinga okuthile ukupheka, ukuwasha, zihlanzekile, futhi lokhu, ingqondo wena, kuthatha isikhathi esiningi. Yiqiniso, zikhona izici ezinhle sokukhulelwa yesibili. Abesifazane usunolwazi oluhle kakade olubanzi ethwele ingane, zinjalo indlela baqaphela ngokwengeziwe ekuzalweni yesibili.
Izici yokuzalwa yesibili
lokuzalwa Okwesibili kwaba uneventful, kulula futhi kulula. Lokhu kusebenza dilatation wesibeletho. Uma ukwambulwa ngesikhathi sokuzalwa ngowokuqala amahora amabili nantathu, kanti eyesibili - inqubo ukuthi kuthatha amahora ayisishiyagalombili. Imisipha kwesibeletho emomozini futhi babe nokunwebeka, encishisiwe fetus abagulela ukufa ndima - futhi lokhu kungenxa isahlulelo ukulethwa lesibili kulula. Kulula ukuba babe nomntwana futhi kusukela umbono kwengqondo, ngoba umama wayezimisele ngokwenqondo sehlo. Uma owesifazane izolandela ngokucophelela yonke imiyalelo udokotela, ingane ozozalwa ngokushesha. Uma umama osemusha usephendukele ngokuzala kanye, umzimba uyakhumbula lo mcimbi eliyingqayizivele. Inketho lobanele emkhatsini ukukhulelwa - iminyaka emithathu kuya kwemihlanu. Phakathi nalesi sikhathi, umzimba kubuyiselwa ngokuphelele futhi aqoqana amandla ngoba umntwana wesibili.
sokukhulelwa Okwesibili, njengoba sishilo, wabe kulula futhi kulula. Kodwa kungcono kubutwa kuwufanele: kungani okwesibili, ungakwazi abelethe nge izinkinga? Kwasekuqaleni, kungase kuhlotshaniswe nge isisu noma ukuphuphuma, futhi isifo ukuvuvukala. Khona-ke, ngemva kokuzalwa wokuqala kungaba deplete emzimbeni. Ngokusho odokotela, izizukulwane yesibili sishesha, futhi ngenxa isizukulwane sesithathu nesesine kungenzeka nzima yokukhathala komzimba. Ngakho kufanele ulalelisise lapho umzimba wakho futhi unakekele impilo yabo. Isiphuzo-kadokotela amavithamini, futhi ngidla ngendlela efanele.
Esinye isizathu siwukuthi Ukubeletha phakathi kwezidingo kuqala. Nakuba odokotela ziye ungakabi kwakhiwe ukuthi ngabe ngendlela ejwayelekile ukuba azale owesifazane, uma engazala caesarean. Lapha kubalulekile ukuba acabangele khona izinyembezi lwesitho sangasese sowesifazane noma wesibeletho. Uma lokuzalwa lokuqala okwakukhona izikhala, lokhu kungase kuyishintshe emgudwini wokuzala, kanye nezicubu bangaba yini nokunwebeka. Kuyadingeka ukuba acabangele yobudala unina. Umnyaka engcono ubhekwa iminyaka 18-29 ubudala, ngoba ngaleso sikhathi kukhona izinkinga ezithile zokumpontshelwa sokukhulelwa nokuthola abantwana.
Ngakho, wena kufanele sihlolisise empilweni yabo. Ngokuvamile kudingeka uphumule, zonke iziqondiso udokotela liyadingeka ukwenza, udinga ukugwema nephunga likagwayi kanye notshwala. Dedela imikhuba emibi ngokushesha.
Ubungozi kungenzeka ngabazali abanomthwalo ezahlukene RH igazi. Kumelwe kudlule bonke ukuhlolwa ezidingekayo ngaphambi lokukhulelwa ingane, musa ubuvila ukukwenza.
Akunandaba - une sokukhulelwa lakho lokuqala noma lesine. Kubalulekile ukuthi lokhu kwenzeka kakhulu kwevamile emphilweni wonke umuntu, zonke umama, yonke imindeni. Maduze kuyoba yesibili ngokuzalwa, harbingers of them are cishe iyafana yokuqala, futhi ngenxa yalokho, i umama abanolwazi akusho ukudida nabo lutho. Ngokushesha ozozalwa indoda entsha, futhi udinga ukuqinisekisa ukuthi ayekhula esebenzayo, enempilo, bejabule futhi kumnandi.
Ukukhulelwa ezimbili zilandelana, uthi: izinkinga ezibhekene owesifazane?
Ingabe ngidinga ukuthola ngebhandeshi kwabesifazane abakhulelwe kanjani ukukhetha?
Nginga ubhamubhamu ukhulelwe? Ukuphela the izinganekwane
Hypertonicity kwesibeletho ngesikhathi sokukhulelwa: kulapho lisongela nendlela ukulwa naso
Kungani ogulayo ngesikhathi sokukhulelwa Kungani futhi?
Metipred ngesikhathi sokukhulelwa. Amaqembu alwayo owesifazane okhulelwe nengane yakhe
Yokugcoba nge osteochondrosis yomgogodla wesibeletho. imithi ye wesibeletho esiwohlozayo disc isifo
Musical "Ukuhamba ku kwelanga". ababukeli Guest baxgeki
Izidakamizwa "Utrozhestan" - fanekiso ukuba "duphaston"
Uphudingi Amnandi Futhi okunempilo
Ukusetshenziswa Bitumastic ngalinye 1 m2 isisekelo ungangenisi amanzi, uphahla, iphansi, amapayipi, imithombo
1237. Izinkundla eRussia futhi ngokuqinisekile ijoka Mongol-Tatar
Ikotishi laseChekhov Gurzuf (isithombe)
Indzaba Humane: indaba "Isintu" futhi imininingwane yalolu ukuloba kwakhe
Kufanele umbhede omdala ukulala kangakanani? ubuthongo kuyinsakavukela
Yini okufanele ibe ibhodi kazibuthe ngomntwana?